द कपिल शर्मा शोमा सुनिल ग्रोवरको फिर्ती ? यी सुपरस्टारले गराइ दिए पुनः दोस्ती – News Nepali Dainik
द कपिल शर्मा शोमा सुनिल ग्रोवरको फिर्ती ? यी सुपरस्टारले गराइ दिए पुनः दोस्ती
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण ०६, २०७७ समय: ६:३८:१४
एजेन्सी : दर्शकलाई अत्यधिक हसाउने द कपिल शर्मा शो हाल बन्द छ । शोको अचानक प्रसारण बन्द हुँदा धेरैलाई खल्लो पनि महसुस भइरहेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमलाई विश्वास गर्ने हो भने द कपिल शर्मा शो नयाँ स्वाद र क्रिए टिभिटीसँगै जुलाईमा फिर्ता हुनेछ । नयाँ कार्यक्रमले दर्शकलाई अझै खुसी बनाउनेछ किनभने यहाँ कपिल शर्मा र सुनिल ग्रोवर पुनः एकपटक कमेडी गरिरहेको देखिनेछन् ।
द कपिल शर्माको नयाँ सिजनसँगै सुनिल ग्रोवर पनि कार्यक्रममा फिर्ता हुनेछन् । हुन त यसअघि पनि सुनिल कार्यक्रममा फिर्ता हुन लागेको खबर बारम्बार आइसकेको छ तर अहिलेसम्म यस्तो हुन सकेको थिएन । तर अब रिपोर्टलाई विश्वास गर्ने हो भने कपिल र सुनिलबीचको विवाद मिलाउने काम सलमान खानले गरेका छन् ।
सलमान खानले सुनिललाई मनाएः कोइमोई डट कमको रिपोर्ट अनुसार सलमान खानले कपिल शर्मा र सुनिल ग्रोवर बीचको वि’वाद मिलाइ दिएका छन् । उनी सुनिलसँग एक विशेष स’म्बन्ध सेयर गर्छन् र शोमा सुनिलको फि’र्ती होस् भन्ने चाहन्छन् । यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने द कपिल शर्मा शोका निर्माता सलमान खान नै हुन् । सुनिल शोमा फिर्ता हुन लागेको सङ्केत हालै सोसल मिडियामा पाइएको हो । कपिल शर्माका मेकअप आर्टिस्टले सुनिल ग्रोवरसँग सोसल मिडियामा फोटो सेयर गरे का थिए ।
Last Updated on: February 18th, 2021 at 6:38 am